Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd yi professional umenzi PCB kunye PCBA Ukususela ngowe-1996, nto leyo use Shenzhen. Kunye nophuhliso olukhawulezayo yeshishini, ukuze ukukhawulelana nemfuno, siye sasungula oluncedisayo PCB emangalisayo (HK) LIMITED yanikezelwa kushishino amazwe.
Enye inkonzo isikhululo kufuneka inikelwe kwinkampani wethu:
PCB lwebhodi yezitshixo & PCB design;
Nika PCB 1 inwebu ukuba maleko 28 abanama-nocoselelo lwetshiphu emsebenzi-mninzi;
PCB ndawonye. Amacandelo Mount kwi ibhodi PCB ;
Ukubonelela components PCB esekelwe izibonelelo yobungcali.
PCBs lethu ukuba ngobubele kusetyenziswa kwiinkalo ezininzi kuquka unxibelelwano, iikhompyutha, izixhobo zonyango, imveliso esizisebenzelayo sekhaya, imveliso CCTV, umthengi electronic, ishishini imoto, njl. Ukutyhubela iminyaka emininzi amava eli, siye wazuza igama elihle babeyijonga ethembekileyo ixesha elide umenzi intsebenziswano ekhaya nakumazwe aphesheya.
Zonke iimveliso zethu kulandelwa iklasi IPC kwaye samkelwa ul, ROHS kunye ISO9001. Ngaphaya koko, inkqubo yethu 3TTQC (Technology System, Training System, loMxokelelwano yoBulunga kunye Customer System) ukwenza iinkonzo zabaxumi egqibeleleyo, umthamo omkhulu, iimveliso abaqeqeshiweyo oluthembekileyo, kwi-ixesha delivery, ixabiso mveliso ukuhlangabezana neemfuno zabathengi yakhe.
Injongo yethu kukuba sibe enye ekhokela PCB zeengcali kunye nokusebenza abadumileyo kunye nobugcisa in China.
Welcome ukubhala kuthi ngenxa yaso nasiphi na isicelo!
Nceda email wonderfulpcb@wonderfulpcb.com ulwazi olubanzi okanye Qhagamshelana nathi intanethi.
Bob: +86 13902314158